व्यावसायिक शिक्षामा अनुसन्धान र विकास अवधिमा सर्दै | RayHaber | raillynews
घरसाधारणव्यावसायिक शिक्षामा अनुसन्धान र विकास अवधिमा सर्दै
21 / 05 / 2020 साधारण, HEADLINE, पछिल्लो मिनेट, टर्की
व्यावसायिक शिक्षामा अनुसन्धान र विकास
राष्ट्रिय शिक्षा मन्त्री महमूद ओजरले एक अखबारलाई व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूको लागि आफ्नो महामारीको पोस्ट योजनाको बारेमा भने। उज्जरले भने, "हामीसँग २० वटा अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरू हुनेछन्। प्रत्येक केन्द्रले फरक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ। ”
राष्ट्रिय शिक्षा मन्त्रालयका उपमन्त्री अजरको अन्तर्वार्ता निम्नानुसार छ: “अब हामी व्यावसायिक शिक्षामा अनुसन्धान र विकासको युगमा गइरहेका छौं” राष्ट्रिय शिक्षा उप-मन्त्री -जेजरले भने कि यो व्यावसायिक शिक्षामा कोविड १ out को सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी हुनेछ, हामी वितरणको बारेमा विचार गर्दै नयाँहरू थप्नेछौं। हामीसँग लगभग २० आर एण्ड डी केन्द्रहरू छन्। प्रत्येक केन्द्र फरक क्षेत्र मा केन्द्रित हुनेछ। उदाहरण को लागी, एक केन्द्र मात्र सफ्टवेयर को लागी सौदा गरीन्छ, जबकि अर्को बायोमेडिकल उपकरण टेक्नोलोजी मा केन्द्रित हुनेछ। यसको मुख्य फोकस उत्पादन विकास, प्याटेन्ट, उपयोगिता मोडेल, डिजाइन र ट्रेडमार्क उत्पादन, दर्ता र व्यावसायीकरणमा हुनेछ। हामी लगातार उत्पादन दायरा बढाउनेछौं। अब हामी यी प्रादेशिक अनुसन्धान र केन्द्र केन्द्रहरूमा हाम्रो शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित गर्नेछौं। " स्वचालन, सफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलोजी र डिजिटल सीपहरूको प्रक्रिया पछि वाणिज्य शिक्षा पाठ्यक्रम छिटो अद्यावधिक हुनेछ भनेर औँल्याउँदै उज़रले अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रहरूले अद्यावधिक गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कुरामा जोड दिए।
राष्ट्रिय शिक्षा मन्त्रालयले कोविद १ 19 को प्रकोपको लडाईको दिनमा ठूलो आक्रमण शुरू गर्‍यो। स्कूलको अगाडि आवश्यक कीटाणुशोधन सामग्रीबाट मास्कबाट, अनुहार सुरक्षात्मक खाईबाट डिस्पोजेबल गाउन र चौतर्फी क्षेत्रहरूमा उत्पादनको ठूलो संख्या उत्पादन गरिएको थियो। यस प्रकार, संघर्षको पहिलो दिनहरूमा महामारीको रोकथाम गर्न एमईबीले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो। त्यसपछि उनले मास्क मेशिन, एयर फिल्टर्टेरेशन उपकरण, भिडियो laryngoscope उपकरण श्वसनकर्ताको उत्पादन जारी राखे। यस प्रक्रियामा, जसले कडा व्यावसायिक शिक्षाको महत्त्व देखाउँदछ, MoNE का उपमन्त्री महमुत एजरले कोविड १ of को प्रकोप पछि कस्तो प्रकारको व्यावसायिक शिक्षा योजना हुनेछ भनेर वर्णन गरे।
'हामीमा नकारात्मक असर परेको थियो'
कोविद १ fighting को लडाईको दिनमा, व्यावसायिक प्रशिक्षणले सफल परीक्षा दियो। तपाइँ व्यावसायिक शिक्षाको भविष्यका लागि के योजना बनाउनुहुन्छ, जसमा अविश्वसनीय अनुभव पनि छ?
व्यावसायिक शिक्षा हाम्रो देश मा धेरै बर्ष देखि श्रम बजार को आवश्यक व्यावसायिक कौशल संग मानव संसाधन को प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै छ। वोकेशनल शिक्षाको खास गरी गुणांक पछि आवेदन डिप्रेसन अवधि थियो। यस अवधिमा व्यावसायिक शिक्षा शैक्षिक रूपमा सफल विद्यार्थीहरूको छनौट हुन छोडेको छ। त्यसपछिका वर्षहरूमा, एक दोस्रो झटका सबै हाई स्कूलहरूमा प्लेसमेन्ट पोइन्टहरूको प्रयोगमा अनुभव भयो। गुणांक आवेदन दोहोर्याउन थालेपछि के भयो, व्यावसायिक शिक्षा फेरि अपेक्षाकृत असफल विद्यार्थीहरूको लागि अनिवार्य विकल्पमा परिणत भयो। यी प्रक्रियाहरूले हाम्रो व्यावसायिक उच्च विद्यालयहरूमा हाम्रा व्यवस्थापकहरू र शिक्षकहरूको मनोबललाई नकरात्मक रूपमा असर गर्‍यो। व्यावसायिक शिक्षा समस्या, विद्यार्थी अनुपस्थिति, र अनुशासनात्मक अपराधको लागि परिचित छ। नतिजा स्वरूप, श्रम बजारको अपेक्षाहरू पूरा गर्न स्नातकहरूको असक्षमताले व्यावसायिक शिक्षा प्रति नकारात्मक धारणालाई थप बल दियो। त्यसकारण, व्यावसायिक शिक्षामा आत्मविश्वासको गम्भीर क्षति भयो।
'आत्मविश्वास प्राप्त भयो'
के आत्मविश्वास गम्भीर रूपमा यस प्रक्रियामा पुनः प्राप्त भयो?
ठ्याक्कै। यस प्रक्रियाको सबै भन्दा महत्वपूर्ण योगदान व्यावसायिक शिक्षाको पुरानो प्रतिष्ठित दिनहरूमा आत्मविश्वास पुनः प्राप्त गर्नु थियो। अवसरहरू दिएर र उत्प्रेरित भएपछि उनले के गर्न सक्थे भनेर देखाए। यस प्रक्रियामा, यो एजेन्डामा यसको उत्पादन र उत्पादन क्षमताको साथ आएको हो, व्यावसायिक शिक्षा समस्याहरूको साथ होईन। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया संगठनहरूले बढी सफलता राख्ने क्रममा आत्मविश्वास बढ्दै गयो। उनीहरू के गर्न सक्छन्, उत्पादन गर्छन्, र उनीहरूले जे उत्पादन गर्छन् भन्ने विश्वासको रूपमा, सफलता यसको साथ आयो।
'हरेक केन्द्रले एक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ'
के Kovid-19 प्रकोप पछि दिनहरुमा आर एण्ड डी केन्द्रहरु स्थायी हुनेछ?
व्यावसायिक शिक्षा मा, हामी अब अनुसन्धान र विकास अवधि को माध्यम बाट जाँदैछौं। यो व्यावसायिक शिक्षाको लागि कोविड - १ out प्रकोपको सब भन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी मध्ये एक हो। यस प्रक्रियामा हामी क्षेत्रीय वितरणलाई ध्यानमा राखेर हामीले स्थापना गरेका आर एण्ड डी केन्द्रहरूमा नयाँ थप्नेछौं। यी अध्ययनहरू पूरा हुने क्रममा छन्। हामीसँग लगभग २० आर एण्ड डी केन्द्रहरू छन्। प्रत्येक केन्द्र फरक क्षेत्र मा केन्द्रित हुनेछ। उदाहरण को लागी, एक केन्द्र मात्र सफ्टवेयर को लागी व्यवहार गर्दछ, जबकि अर्को बायोमेडिकल उपकरण टेक्नोलोजी मा केन्द्रित हुनेछ। केन्द्रहरु एक अर्का संग निरन्तर संचार मा हुनेछ र एक अर्कालाई समर्थन गर्दछ। यी केन्द्रहरू उत्कृष्टता केन्द्रहरू पनि हुनेछन्। यसको मुख्य फोकस उत्पादन विकास, प्याटेन्ट, उपयोगिता मोडेल, डिजाइन र ट्रेडमार्क उत्पादन, दर्ता र व्यावसायीकरणमा हुनेछ। हामी लगातार उत्पादन दायरा बढाउनेछौं। हामी अब यी प्रादेशिक अनुसन्धान र केन्द्र केन्द्रहरूमा हाम्रो शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित गर्नेछौं। यी केन्द्रहरूले व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम अपडेट गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछन्।
तिनीहरूको भरोसा बढ्यो
के हामी भन्न सक्छौं कि एमईबीले व्यावसायिक शिक्षामा विगत दुई वर्षदेखि गरेको लगानीले फल फलायो?
हो मन्त्रालयको रूपमा, हामीले वास्तवमै व्यावसायिक शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। हामीले एक पछि अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्टहरू बुझेका छौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पहिलो पटक हामीले शिक्षाका सबै क्षेत्रहरूमा यस क्षेत्रका कडा प्रतिनिधिहरूसँग गहन र व्यापक सहयोग गरेका छौं। यसैले व्यावसायिक शिक्षामा क्षेत्रहरूको विश्वास क्रमशः बढेको छ। यी सबै चरणहरूले यस प्रक्रियामा उत्पादन गर्न एक छिटो, सामूहिक र गतिशील प्रतिक्रिया सक्षम गर्दछ।
अब तपाईं कसरी योजना बनाउनुहुन्छ?
हामी व्यावसायिक शिक्षामा शिक्षा-उत्पादन-रोजगार चक्रलाई सुदृढ पार्न जारी राख्नेछौं। हामी श्रम बजार संग एक मजबूत सहयोग मा प्रशिक्षण निरन्तर अपडेट गर्नेछौं। हामी हाम्रो व्यावसायिक उच्च विद्यालयलाई उत्पादन केन्द्रहरू बनाउँदछौं। हामी लगातार उत्पाद र सेवाहरूको उत्पादन क्षमता बृद्धि गर्नेछौं, विशेष गरी कोष फिर्ताको दायरा भित्र। उदाहरणको लागि, २०१ 2019 मा, हामीले यस दायरामा उत्पादनबाट प्राप्त आम्दानी 40० प्रतिशतले बढेर 400०० करोड टीएल गर्नुभयो। २०२१ मा, हाम्रो लक्ष्य १ अरब बिल टीएल उत्पादन हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा श्रम बजारमा स्नातकहरूको रोजगार क्षमता र रोजगारीको अवस्था सुधार गर्ने हो। रोजगारी प्राथमिकताका साथ क्षेत्रहरूसँग हामीले स्थापित गरेको सहयोग यसका लागि हाम्रो पहिलो कदमहरू थिए। यी चरणहरू अझ मजबूत हुन जारी राख्नेछन्।
'हामीले केन्द्रित सबै उत्पादनहरू उत्पादन गरियो'
तपाईले व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा अनुसन्धान र विकास केन्द्रहरू स्थापना गर्नुभयो। उद्देश्य के थियो?
कोविड १ comb को मुठभेडको दिनमा व्यावसायिक प्रशिक्षणको योगदान दुई गुणा थियो। पहिलो चरणमा सामूहिक उत्पादन र आवश्यक मास्क, कीटाणुनाशक, अनुहार सुरक्षा ट्रेंच, डिस्पोजेबल एप्रन र चौग्रा को वितरण। यो चरण धेरै सफल थियो र यस सन्दर्भमा निर्माणहरू अझै भइरहेका छन्। दोस्रो चरणले कोभिड १ combat लाई लड्नका लागि आवश्यक पर्ने श्वासप्रश्वासकहरू र मास्क मेशिनहरू जस्ता उपकरणहरूको डिजाइन र निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। दोस्रो चरणमा सफल हुनको लागि, हामीले हाम्रो व्यावसायिक र प्राविधिक एनाटोलियन हाई स्कूलहरू भित्र शक्तिशाली पूर्वाधारको साथ R&D केन्द्रहरू स्थापना गरे। हामीले यी उत्पादनहरूको डिजाइन र उत्पादनको लागि हाम्रो आर एंड डी केन्द्रहरूको पूर्वाधारलाई सुदृढ गरेका छौं। यी केन्द्रहरूमा हामीले इस्टानबुल, बुर्सा, टेकिर्डाइ, अन्कारा, इज्मिर, कोन्या, मर्सिन, मुल्ला र हाते जस्ता प्रान्तहरूमा स्थापना गरेका यी केन्द्रहरूमा धेरै गहन अध्ययन गरिएको थियो। यी केन्द्रहरूमा, हामी केन्द्रित सबै उत्पादनहरू उत्पादन गर्न सक्षम छौं। यस सन्दर्भमा, धेरै उत्पादनहरू डिजाइन र उत्पादन गरिएको थियो जस्तै सर्जिकल मास्क मेशिन, श्वासप्रश्वासक, N19 मानक मास्क मेसिन, भिडियो laryngoscope उपकरण, गहन देखभाल बिस्तर, हवा फिल्टरन उपकरण, नमूना एकाई।
ITU-ASELSAN का साथ सहकार्य
पाठ्यक्रम अपडेटलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईले नयाँ अद्यावधिकहरू गर्नुहुनेछ, कोबिद १ out प्रकोप पछि रोजगार बजार पनि विकसित हुनेछ भन्ने विचार गरेर?
अवश्य। यो प्रक्रिया पछि र डिजिटल सीपहरूको लागि द्रुत पाठ्यक्रम नवीकरण हुनेछ। हामी व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा संस्थानहरूलाई संस्थाका रूपमा मान्दैनौं जहाँ केवल सीप शिक्षा प्रदान गरिन्छ। हामी हाम्रो सबै विद्यार्थीले मुख्य सीपहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौं ता कि तिनीहरू टेक्नोलोजिकल र सामाजिक सर्तहरूमा परिवर्तन गर्न सक्ने छन्। समयको साथ, हामी व्यावसायिक र सामान्य शिक्षा बीचको भिन्नता कम गर्न चाहन्छौं। त्यसकारण हामी दुबै प्राविधिक र शैक्षिक रूपमा मजबूत संगठनहरू जस्तै ITU र ASELSAN लाई सहयोग गर्दछौं। रोजगार बजारमा क्षेत्रको टेक्नोलोजिकल स्तर अनुसार आवश्यक सीपहरू हामीले सिकाउने सबै पेशाहरूमा पाठ्यक्रममा थपिनेछन्। यद्यपि हामी यसमा सन्तुष्ट हुनेछैनौं तर हामी आफ्ना स्नातकहरूको सामान्य सीपलाई मजबुत पार्न कार्य गर्नेछौं।
ग्रीष्मकालीन ढुवानी कोकलीमा सुरु हुँदैछ
मुम्बुटबई टोलहरू निःशुल्क पासज प्रणालीमा
शिक्षामा TCDD सहायक सहायकहरू
TCDD र अंकारा विश्वविद्यालय बीच शिक्षा मा सहयोग मा प्रोटोकल
Akçaray प्रस्थान को लागि ग्रीष्म को समय
सार्वजनिक ढुवानी मा Sakarya Passes Validator अवधि
हल्कपिनारमा नयाँ ट्राफिक अर्डर
अन्तिम चरणहरू पासक ट्राममा पास
120 हजारौं मानिसहरू अन्टाल्यामा रात यात्राको साथ सारियो ...9सेप्टेम्बर योजना सुरु हुने सेप्टेम्बरमा
TÜVASAŞ महाप्रबन्धक इब्राहिम इर्टिरियाकीले छिमेकी देशहरूसँग व्यापार सम्झौता स्थापित गर्नेछ।
ग्रेटर सार्वजनिक ट्राफिकको लागि सार्यारी स्टार्ट सर्वेक्षण
नयाँ शिक्षाको लागि MOTAŞ तयार छ
रावल यातायात निजी क्षेत्र मा खुल्यो
बायोमेडिकल उपकरण टेक्नोलोजीहरू
हवा फिल्टर प्रक्रिया उपकरण
व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय
व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा अनुसन्धान र केन्द्रहरू
N95 मास्क मेशीन
भिडियो laryngoscope उपकरण
कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलोजीहरू
गहन देखभाल ओछ्यान
ईगो चालक प्रशिक्षण
Atatürk व्यावसायिक र टेक्नोलॉजी Anatolian हाई स्कूल TÜDEMSAŞ को भ्रमण